नुवाकोट १ मा महतलाई वाम गठबन्धनको चुनौती
Sat, Jun 23, 2018 | 04:03:10 NST
20:14 PM (7months ago )
नुवाकोट, कात्तिक २८ – नुवाकोटको राजनीतिमा सधैं उदाउने डा. रामशरण महतलाई यस पटकको चुनावमा वाम गठबन्धनको कडा चुनौती रहेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका नेता पटक–पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । वाम गठबन्धन नभएको भए डा. महत आफ्नो क्षेत्रमा जित्ने निश्चित जस्तै थियो ।
वाम गठबन्धनको कारण लगातार चार पटक चुनाव जितेका डा. रामशरण महतलाई र ०७० सालको चुनाव जितेका अर्जुन नरसिंह केसीको लागि यो चुनाव असहज देखिएको छ ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा १ बाट प्रतिनिधिसभाको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. रामशरण महतले वाम गठबन्धनको कारण चुनौती थप भएको स्वीकार्नुहुन्छ । ‘हो, वाम गठबन्धनको कारण केही चुनौती अवश्य छ । यसले असर पनि परेको छ । गठबन्धनको कारण मेरो हार भने हुँदैन’ डा. महतले भन्नुभयो ‘म एकदम उत्साहित छु । मतदाताहरुको साथ पाएको छु । उनीहरुलाई भेटेपछि जित्नेमा निश्चित भएको छु ।’
साविकको क्षेत्र नं. २ मा ०५१ सालबाट जित्दै आएका डा. महतले ०४८ सालमा साविकको क्षेत्र नं. १ बाट पराजित हुनु भएको थियो । अहिलेको क्षेत्र नं. १ मा साविकको क्षेत्र नं. २ र क्षेत्र नं. १ को ७५ प्रतिशत परेको छ । २०४८ सालमा पराजित गराउनु भूल भएको भन्दै पुरानो क्षेत्रमा मतदाताले पनि यो पटक जिताउने वाचा गरेको डा. महतको दाबि छ । ‘त्यो बेलामा जिताउन पाएको भए हाम्रो क्षेत्रको विकास हुने रहेछ । तपाई हामीलाई छाडेर हिँड्नु भयो’ उहाँले मतदाताको भनाई भन्दै भन्नु भयो ‘यो पटक उम्किन दिने छैनौं ।’
क्षेत्र नंं १ मा शवपुरी, दुप्चेश्वर, पन्चकन्या, तादी, सूर्यगढी, लिखु र ककनी गरि सातवटा गाउँपालिका रहेको छ ।
स्थानीय तह चुनावको परिणामका आधारमा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई हेर्दा क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसले २२ हजार ६ सय ५२ मत प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले १८ हजार ७ सय ७८ र एमालेले १८ हजार १ सय ८४ मत प्राप्त गरेको छ ।
क्षेत्र नं. १ को प्रदेश ‘ख’ का कांग्रेसका उम्मेदवार रमेश महत भने वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई एक बनाएको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सभाका उम्मेदवार महतले भन्नुभयो ‘वाम गठबन्धनले कांग्रेसमा देखिएको गुट उपगुट समाप्त भएको छ । हामीलाई एक बनाएको छ । अब कांग्रेसको मत विभाजित हुन्न । त्यसैले वामगठबन्धनले असर गर्दैन ।’
क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हितबहादुर तामाङ यो पटक आफूले १५ हजार बढी मत ल्याएर जित्ने दाबी गर्नुहुन्छ । तामाङले भन्नुभयो ‘यो क्षेत्रका नागरिकले परिवर्तन चाहेका छन् । यो पटक हामीलाई साथ दिनेछन् ।’ तामाङ ०६४ र ०७० को चुनावमा डा. महतसँग नै पराजित हुनुभएको थियो ।
गाउँ गाउँमा मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका उम्मेदवार तामाङले मतदाताको साथ र उत्साहको कारण आफ्नो जित निश्चित भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
नुवाकोट क्षेत्र नं. १ को प्रदेश (क) मा वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी राधिका तामाङ र प्रदेख (ख) मा बद्री मैनाली र नेपाली कांग्रेससबाट प्रदेश (क) मा महेन्द्र थिङ र प्रदेश (ख) मा रमेशकुमार महत चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अन्य दलका उम्मेदवार रहे पनि नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ ।